Kana pasina Apple Car, varikudei ma patents aya? | Ndinobva mac
Ichokwadi icho Apple yaizokwanisa patent kunyangwe mweya unofema vashandi vayo, asi mune iyi nyaya Apple Car yaisazoita zvine musoro kune aya ma patent akaburitswa na Appleinsider uye maunogona kuona, semuenzaniso, zvigaro zvinoenderana nemushandisi wega wega kana skrini yemunhu.
Chokwadi ndechekuti patent inoratidza chigaro chine mufanidzo waunogona kuona pamusoro pemitsara uye dzinoratidza munhu ari pachinzvimbo chekutyaira chaaizogadzirisa pasina kubata chero chinhu, chingori panopinda mushandisi wega wega. Isu tinofungidzira kuti ichi chinhu chakafanana nemaprofiles isu atinogona kunyora mumota (mune mamwe emhando yepamusoro-magumo) izvo dzinongoerekana dzajairana nemutyairi wega wega.
Mune ino kesi, idzi mhando dzepamutemo hadzitsanangurwe kana "mota yeApple iri kumashure" kwavo. Iyo iPhone ingave iri zambuko pakati pemhando idzi dzekugadzirisa zvigaro uye ichi chinhu chinonakidza. Kuziva munhu neiyo iPhone zvinoita uye Isu tinofungidzira kuti ivo vanenge vafunga nezve zvinoitika nekukurumidza kana vaviri kana vanopfuura vanhu vapinda neApple chishandiso mumotokari iyi inofungidzirwa.
Chinhu pamusoro pemotokari yeApple chine muswe mwedzi iyi uye zvinoita sekunge maratendi ese anga achiratidza kuti ariko zvechokwadi. Isu tatoziva zvinoitika nemapatendi aya uye isu zvakare tiri pachena kuti kunyangwe kukwereta kwakawanda sei kwemotokari kana murume anotyaira kuchioneka pairi, hazvireve kuti vachagadzira mota. Iva sezvazvingaite, iwe unofanirwa kurega mwedzi ichienda uye kumirira kuti uone kana kufungidzira kwevaongorori vakaita saMing-Chi Kuo vanoyambira nezvemota iyi kwemakore mana kana mashanu azadzikiswa. Eheka zvibvumirano zverudzi urwu zvinoratidza kuti vanogona kunge vachishanda pariri, Tichaona.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Kana pasina Apple Car, varikudei ma patents aya?
Apple patents titanium mameseji emangwana MacBooks